Zvinotaurwa naBoeing mushure meshumo wekuparara kweShumba Air Flight 610?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Zvinotaurwa naBoeing mushure meshumo wekuparara kweShumba Air Flight 610?
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Indonesia Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • chengetedzo • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Boeing Mutungamiri & CEO Dennis Muilenburg
Yakachengeteka sei Boeing 737 Max. Uyu waive mubvunzo waigara uchibvunzwa mushure Shumba Mhepo mutsaona inouraya muIndonesia uyezvezve mushure mekunge mushumo uchangoburwa wawana kuti Boeing yakundikana kuona kukanganisa kwesoftware zvichikonzera mwenje wekuyambira usingashande uye ikatadza kupa vatyairi ruzivo nezve hurongwa hwekudzora ndege.
Chikonzero vanhu 189 vakafa paShumba Mhepo yaive nechokuita nemagadzirirwo aBoing, kuchengetedza kwendege kwejeti uye zvikanganiso zvekutyaira zvakakonzera njodzi.
nhasi Boeing yakaburitsa chirevo chinotevera maererano nekusunungurwa nhasi kwemushumo wekupedzisira wekuferefeta weLion Air Flight 610 neIndonesia yeNational Transportation Safety Committee (KNKT):
“Ndichimiririra munhu wese ari kuBoeing, ndinoda kuendesa runyararo rwedu kumhuri uye vadikani veavo vakarasikirwa nehupenyu munjodzi idzi. Tinochema neLion Air, uye tinoda kuratidza tsitsi huru kumhuri yeShumba Air, ”akadaro Boeing President & CEO Dennis Muilenburg. "Zviitiko zvinosuwisa izvi zvakatikanganisa tese uye ticharamba tichiyeuka zvakaitika."
"Tinorumbidza Komiti Yezvekufambisa yeIndonesia Yezvekutakurwa nekuedza kwayo kukuru kuona chokwadi chenjodzi iyi, izvo zviri kukonzera zvikonzero nezvikurudziro zvakanangana nechinangwa chedu chekuti izvi zvisazomboitikazve."
"Tiri kutaura nezvekurudziro yeKKKT yekuchengetedza, uye kutora matanho ekusimudzira kuchengetedzwa kwe737 MAX kudzivirira mamiriro ekudzivirira kwendege akaitika mutsaona iyi kuti isazomboitikazve. Kuchengetedza kukosha kusingagumi kune wese munhu kuBoing uye kuchengetedzeka kweruzhinji rwevanhu vari kubhururuka, vatengi vedu, nevashandi vari mukati medzendege dzedu ndizvo zvinonyanya kukosha. "Tinokoshesa kubatana kwedu kwenguva refu neLion Air uye tinotarisira kuramba tichishanda pamwe chete mune ramangwana."
Nyanzvi dzeBoing, dzichishanda sevapi vehunyanzvi kuUS National Transportation Safety Board, vakatsigira iyo KNKT panguva yekuferefeta. Mainjiniya ekambani anga achishanda neUS Federal Aviation Administration (FAA) nevamwe vatongi vepasirese kugadzira software uye zvimwe shanduko, vachifunga nezve ruzivo rwunobva mukuferefetwa kweKNKT.
Kubvira tsaona iyi, iyo 737 MAX uye software yayo iri kuitika zvisati zvamboitika zvehutongi hwepasi rose hwekutarisa, kuyedza uye kuongorora. Izvi zvinosanganisira mazana ezvikamu zvemuenzaniso uye nendege dzekuyedza, ongororo yemutemo yezviuru zvemagwaro, kuongororwa nevatongi uye nyanzvi dzakazvimiririra uye zvakazara zvitupa zvinodiwa.
Pamwedzi yakati wandei yapfuura Boeing anga achichinja kune iyo 737 MAX. Kunyanya kukosha, Boeing yakagadzirisa nzira iyo Angle yeAttack (AoA) maseru anoshanda nechinhu cheiyo ndege yekudzora software inozivikanwa seManeuvering Characteristics Augmentation System (MCAS). Kuenda kumberi, MCAS ichaenzanisa ruzivo kubva kune ese maAoA sensors usati waita, ichiwedzera nyowani yekudzivirira.
Uye zvakare, MCAS ikozvino ichavhurika chete kana ese maAoA sensors akabvumirana, achazongoshanda kamwe chete mukupindura zvisirizvo AOA, uye ichagara iri pasi pemuganhu wakanyanya unogona kuwanda nekoramu yekudzora.
Iyi shanduko yesoftware inodzivirira mamiriro ekudzora kwendege akaitika mutsaona iyi kubva pakuitika zvekare.
Uye zvakare, Boeing iri kugadzirisa zvinyorwa zvevashandi uye kudzidziswa kwekutyaira, yakagadzirirwa kuona kuti mutyairi wese ane ruzivo rwese rwavanoda kuti vabhururuke 737 MAX zvakachengeteka.
Boeing anoenderera mberi achishanda pamwe neFAA uye mamwe masangano anomiririra pasirese pasitifiketi yeiyo software yekuvandudza uye chirongwa chekudzidzisa kudzosera zvakachengeteka 737 MAX kusevhisi.
Brand USA Inochengeta India pane yayo Virtual Radar